Saraakiil milateri oo lagu kala qoray gobollo kala duwan ee Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Saraakiil Soomaaliyeed oo qaadatay tababar layli sarkaal oo dhawaan loo soo gabagabeeyay ayaa maanta munaasabad lagu qabtay xerada Ciidamada xooga dalka ee Jasiira waxaa looga dhawaaqay in loo kala badalay qaybo ka mid ah Ciidanka iyo gobollada dalka.
Waxaa ka qayb galay munaasabadda wasiir ku xigeenka wasaaradda Gaashaandhiga Cabdalle Xuseen Cali, Abaanduulaha Ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale oo ka tirsan milateriga.
Saraakiishaan ayaa waxaa loo kala badalay dhowr gobol iyo qaybo ciidanka ka mid ah sida taliye koox ,taliye horin, tababarayaal iyo kuwa kale dugsiyada tababarka ciidanka ee Dhoobley, Beledxaawo, Baydhabo, Dhuusamareeb, Jowhar iyo goobo kale ayaa saraakiisha qaar loo badalay.
Madaxa hogaanka Ciidanka, Jeneraal Caynte oo ka hadlay munaasabada ayaa waxaa uu halkaas ka aqriyay magacyada saraakiisha iyo goobaha loo kala badalay isagoo kula dardaarmay saraakiisha in howlaha loo idmaday ay u gutaan si wanaagsan.
Abaanduulaha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Gen Cabdi Risaaq Khaliif Cilmi ayaa waxaa uu sheegay in uu socdo qorshe balaaran oo dib u habeyn iyo tayeen loogu sameynayo ciidanka xoogga dalka oo la doonayo in marka la gaaro 2016ka ay ciidamada AMISOM kala wareegaan dalka.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdalle Xuseen Cali ayaa waxaa uu la dardaarmay saraakiisha la dalacsiiyay ee loo idmaday in ay hogaanka ciidanka xoogga ka qayb qaataan .
Ciidamada mas’uuliyiintu ay kula hadleen xerada Jasiira ayaa waxaa ka mid ahaa ku dhawaad 30 arday ka soo qalin jabisay kuliyada ciidamada jaamacad ku taala dalka Sudan.
Xaflad lagu qabtay magaalada Khartuum ee dalka Sudan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalkaas, Cumar Xasan Al Bashiir iyo wasiir ku xigeenka gaashaandhiga Soomaaliya, Cabdalle Xuseen Cali, waxaana Al Bashiir uu kula dardaarmay Ardadydaan in aqoonta ay barteeen ay ugu adeeegaan Qaranka Soomaaliya.